काठमाडौँ को नाली
Aakar August 17, 2009
काठमाडौँ भन्ने बित्तिकै हिजोआज, धुँवा धूलो उडेको, बाटोभरि फोहोर थुपारिएको, ढल बग्ने खोला, जाम हुने नाली, पानी नआउने धारा आदि इत्यादि याद आउँछ । हुन पनि हो, धुलो उडेको र फोहोर थुप्रिएको या भनौँ फोहोर को गन्ध ह्वास्स नाक मा ठोक्कियो भने, आँखा चिम्लेरै काठमाडौँ आइपुग्यो भन्ने जाने हुन्छ । चाहे वानेश्वर होस्, या न्युरोड वा दरबार मार्ग नै किन नहोस्, फोहोर को डंगुर भेटिन्छन्, बाटो भरि, फुटपाथ बाट हिँड्न पनि गाह्रो ! अझ खोला छेवैछेउ बनेको बाटो बाट त हिँड्छु भनेर नचिताएपनि हुन्छ । खोला कालो देखिन्छ, त्यसमाथि उस्तै नमिठो गन्ध, जति नै नाक थुनेपनि त्यसको गन्ध सिधै नाकबाट माथि मष्तिष्क मा पुग्छ ।
तर आज म एउटा अचम्म को कुरा देखाउँदैछु । जब मैले देखेँ म त छक्क परेँ, अरे यस्तो पनि हुन्छ काठमाडौँ मा ? काठमाडौँ को नाली मा पानी पनि बग्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन, नाली भन्नेबित्तिकै फोहोर थुप्रिएर पानी नबग्ने नाली को याद आउँथ्यो तर जब यो देखेँ तब सबैतिर एकैनास हुँदैन रहेछ भन्ने लाग्यो । साँच्चै भन्दा, काठमाडौँ मा पहिलोपटक मैले यस्तो नाली देखेँ जहाँ संङ्लो पानि बगिरहेको थियो । यो देख्दा सपना हो कि, जस्तो पनि लाग्यो अनि कन्फर्म गर्नलाई मोबाइल ले खिचिक् खिचिक पारिहालेँ । लौ तपाईहरु पनि हेर्नुहोस्, अपवाद बनेर देखिएको पानी बग्ने नाली को फोटो । यो फोटो चाँहि हप्ता दिन अघिजसो, सुकेधारा क्षेत्रमा खिचिएको हो । खै, कसरी यति संङ्लो पानी बग्यो थाहा भएन ! बस चढ्न रोड मा पुगेको म, यो नाली हेरेको हेरेकै भएँ ।
कहिलेकाँहि यस्तो संङ्लो पानी पनि बगेको देखियो, काठमाडौँ को नालीमा ! सबैतिर यस्तै सफा, अनि दुर्गन्ध रहित काठमाडौँ चाँहि कहिले देख्न पाइने हो ?
HAWA August 17, 2009 at 11:32 AM
ओ ब्रो त्यो नाली को पानी होइन सुकेधारा को धारा बाट आएको पानी हुनुपर्छ अब खानलाइ पानी नभएको बेला राम्रो देखिन्छ भनेर नाला मा बगाउने ?
Eternal August 17, 2009 at 11:32 AM
Really Kathmandu has been pollutedalot nowadays and that is being serious problem..but this foto is really exceptional one...I don't know and even don't expect forabeautiful Kathmandu as before... :(
Yumesh Pulami August 17, 2009 at 2:13 PM
" धुलो उडेको र फोहोर थुप्रिएको या भनौँ फोहोर को गन्ध ह्वास्स नाक मा ठोक्कियो भने, आँखा चिम्लेरै काठमाडौँ आइपुग्यो भन्ने जाने हुन्छ ।"
हाहा ... काठमान्डूको पहिचान पनि कस्तो बेग्लै छ है - आकार जी !
आशा गरौ छिटै सबैतिर सफा, अनि दुर्गन्ध रहित काठमान्डू देख्न पाउने छौ |
Asha August 17, 2009 at 6:26 PM
Thanks for sharing nice experience AAKAAR jee if we find something good, it make us surprise now and its kind of hard to believe, after all we all are get to used with those things which are already the part of our life, right ?
rajankathet August 17, 2009 at 9:59 PM
so support our cycling plan.... aakar k chha bichar?